Ishintshe igiya iVuma FM ngezinhlelo ezinkulu | isiZulu
Ishintshe igiya iVuma FM ngezinhlelo ezinkulu
Umsakazi we-Vuma FM ukhwele wadilika kuHlengiwe Mhlaba ethi akagqoki kahle
Uyashiya kwi-Vuma FM uDJ Sbu
Ungamsiza kanjani lo onenkinga engajwayelekile?
Durban - Kulo nyaka odlule, umsakazo iVuma FM ubonakalise okukhulu ukudlondlobala kanti uthathwa njengeminye yemisakazo ehamba phambili ebhekelele abalaleli asebekhulile.
Ukuthuthuka kwayo kubonakale kakhulu ngokuphakanyiswa kwezinhlelo zayo kowezindondo zama-Liberty Radio Awards
nokuyilapho ihlomule khona ngendondo ye-Best Music Show (nokunguhlelo olushayelwa nguNanda “Fresh Prince of Radio”).
Ngale kokuphakanyiselwa lezi zindondo, umkhankaso walo msakazo wokuklomelisa abalaleli ngomshado omhlophe kubabeke kwelinye izinga njengoba ungekho omunye esifundazweni sakwaZulu-Natal onalo mncintiswano ofana nalona.
OLUNYE UDABA:Uyashiya kwi-Vuma FM uDJ Sbu
NgoLwesihlanu ekuseni, lomsakazo ubambe ubambe isithangami sabezindaba emahhovisi abo lapho bebethula khona izinguquko zabo.
Ushintsho lokuqala kwenziwe ohlelweni lwasekuseni i-Good To Go Breakfast olushayelwa wuMakhosi Khoza noGabriel Sithole. Kulolu hlelo sekufakwe intokazi engumlingisi uDawn Thandeka King. UDawn waziwa kakhulu ngendawo yakhe emdlalweni uZalo lapho edlala khona indawo kaMaNgcobo.
Olunye ushintsho olwenziwe yilo msakazo lusohlelweni lwasemini lapho kulandwe khona umsakazi osenolwazi olunzulu kule mboni uLekoMotion.
Lo msakazi uzobe ebambisene noNomfundo Mkhizeto kusukela ngo-3 kuya ku-6 kanti lolu hlelo seluzobizwa nge-The Drive with
LekoMotion & Nomfundo.
Umphathi-jikelele we- Vuma 103 FM, uPearl Sokhulu uthe: "Ngesikhathi sisamzama uDawn waaimangaza kakhulu ngoba wangena khaxa kuleli thimba. Lokhu yikona okwasenza saba neaiqiniseko sokuthi nakanjani kumele ahlale la.
ULekoMotion unalesi spiliyona esisidingayo siwumsakazo ukuze sithuthuke kakhulu kunalokhu futhi sizibeke ezingeni lapho sizokwazi ukugculisa kakhulu abalaleli bethu.
Umndeni ka-Akhumzi Jezile usuqalile ukwenza amalungiselelo omngcwabo
Umndeni womlingisi nomethuli wenzihlelo u-Akhumzi Jezile usuqalile ukwenza amalungiselelo omngcwabo.
Alokhu angene njalo amazwi enduduzo ngokushona kosaziwayo abathathu
INingizum Afrika yonke ishaqekile ngezindaba zangoMgqibelo ntambama zokushona kwalowo ongumethuli wezinhlelo u-Akhumzi Jezile.
Wenze azibukwayo uBabes Wodumo emcimbini wezithuthuthu
Uqale ngegiya eliphezulu kakhulu umcimbi wezithuthuthu owaziwa ngele-South Coast Bike Festival.